इपीएलमा खेल्ने विदेशी खेलाडी कस्ता छन ? संक्षिप्तमा - Nepal Cricket
इपीएलमा खेल्ने विदेशी खेलाडी कस्ता छन ? संक्षिप्तमा
शनिबारबाट सुरू हुने एभरेष्ट प्रिमियर लिगका लागि विदेशी खेलाडी नेपाल अाउन सुरू गरिसकेका छन । यो पटकको विदेशी खेलाडीले पनि थप रोमाञ्चकता थपेको छ । अन्तराष्ट्रिय एरिनामा टेष्ट देशका खेलाडी समेत नेपालमा आएर इपीएल खेल्दैछन । इपीएलमा कस्ता विदेशी खेलाडी खेल्दैछन त ।
इपीएलमा सहभागति तथा शरद भेषवाकरको कप्तानीमा रहेको भैरहवाले तीन जना विदेशी खेलाडीलाई फाइनल गरिसकेको छ । जसमा नेदरल्याण्डस्का रायन टेन डोइच्टे, युएइका मोहम्मद नाभिद र भारतका रवी इन्दर सिंह रहेका छन । नेदरल्याण्ड्सका रायन अलराउन्डर खेलाडी हुन ।
अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा राम्रो अनुभव लिइसकेका रायनले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएलमा पनि कोलकाताबाट खेलिसकेका छन । सन् २००३ देखि नियमित रुपमा इसेक्सबाट खेलिरहेका उनले ३३ एकदिवसिय, १० टी–२०, एक सय ७४ पहिलो श्रेणी र दुई सय १९ लिष्ट ए का खेल खेलेका छन । जसमा ओडीआइमा १५ सय ४१, टी–२० मा २५२, पहिलो श्रेणीमा १० हजार २८३ र लिष्ट ए मा ५ हजार ८२६ रन बनाएका छन । बलिङमा पनि उनले राम्रो प्रभाव पारेका छन । आसन्न इपीएलमा उनको उपस्थितीले भैरहवा झन बलियो टिम देखिएको छ ।
युएईका तिब्रगतिका बलर मोहम्मद नाभिद पनि अलराउन्डर जस्तै हुन । उनले ब्याटिङ र बलिङ दुबैमा टिमलाई सहयोग गर्छन । ओपनर बलरका रुपमा रहेका उनले ३१ एकदिवसिय (३३९ रन, ४२ विकेट) २२ टी–२० (१३७ रन २९ विकेट) लिएका छन । स्न २०१४ मा एकदिवसियमा डेब्यु गरेका उनको बलको तेजले विपक्षी केहि हच्किएको हामीले पीपीएलमा पनि देखेका थियौ ।
रवीइन्दर सिंह पञ्जाबाट भारतीय घरेलु क्रिकेट खेल्छन । उनले नेपालमा यसअघि पनि खेलिसकेका छन । भारतको घरेलु क्रिकेटमा उनले पहिलो श्रेणी, लिष्ट ए र टी–२० मा राम्रो अनुभव बटुलेका खेलाडी हुन । जसमा पहिलो श्रेणीमा २३७८ रन बनाएका छन भने ६ वटा सतक हानेका छन । यस्तै लिष्ट ए मा ३६ खेला १४३१ रन र टी–२० मा २० खेलमा ५४० रन बनाएका छन । टी–२० मा हार्ड हिटरको परिचय बनाएको रवीको खेल पनि इपीएलमा हेर्न लायक हुनेछ ।
शक्ति गौचनको टिम पोखरा राइनोज यसपटक विदेशी खेलाडी भित्र्याउनेमा पहिलो स्थानमा देखिएको छ । उनले स्कटल्याण्ड, इंग्ल्याण्ड र दक्षिण अफ्रिकाबाट इपीएलका लागि खेलाडी ल्याएको छ । यतिमात्र होइन उनले प्रशिक्षक पनि अष्ट्रेलियाबाट झिकाएको छ । अघिल्लो सिजन प्रतियोगितामा खासै राम्रो गर्न नसकेको पोखराले यसपटक स्कटल्याण्डका कप्तान केली कोइट्जेरलाई ल्याएको छ ।
सन् २००३ देखि राष्ट्रिय टिमबाट खेलिरहेका केली एक अनुभवी खेलाडी हुन । उनले नेपाल विरुद्ध पनि विभिन्न प्रतियोगिता खेलेका छन । करियरमा ५० ओडीआए खेलेका उनले १९६९ रन बनाएका छन भने टी–२० मा ४५ खेलमा १०३४ रन बनाएका छन । पार्टटाइम बलरको भुमिका पनि गर्ने उनले एकदिवसियमा चार सतक बनाएका छन । क्रिकेट परिवारको केलीलाई नेपालमा ल्याएर पोखराले टिम बजबुत बनाएको छ ।
केलीसँगै पोखराबाट खेल्ने अर्का विदेशी खेलाडी हुन इंग्ल्याण्डका पल कोउग्लिन, २६ बर्षे पल एक अलराउन्डर हुन । सन् २०१२ देखि २०१७ सम्म डुरहामबाट खेलेका उनले यसैबर्ष नोटिङघमसायरबाट खेल्छन । पहिलो श्रेणी र लिष्ट एको अनुभव बटुलेका उनले ३३ टी–२० खेलमा चार सय ३३ रन बनाएका छन । जसमा एक अर्धसतक छ । यसका साथै उनले टी–२० मा ५३ विकेट पनि लिएका छन ।
पोखराले भित्र्याएको एक स्टार र अनुभवी खेलाडीमा दक्षिण अफ्रिकाका रिचार्ड लेभी हुन । आइपीएल, बंगलादेश प्रिमियर लिग खेलिसकेका उनलेले दक्षिण अफ्रिकाबाट टी–२० पनि खेलिसकेका छन । जसमा उनले १३ वटा अन्तराष्ट्रिय टी–२० खेलमा दुई सय ३६ रन बनाएका छन । जसमा एक अर्धसतक र एक सतक रहेको छ । यस्तै अरु टी–२० मा उनले १९८ खेलमा ५०७० रन बनाएका छन । जसमा ३३ अर्धसतक र ३ सतक छ ।
यसपटकको इपिएलमा राम्रा विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरेको टिममा काठमाडौं पनि हो । उसले तीन जना यस्ता विदेशी खेलाडीलाई भित्र्याएको जसको नाम नै काफि छ । जसमा युएइका कप्तान रोहन मुस्तफा, आयरल्याण्डका केभिन ओब्रेइन रहेका छन ।
रोहन मुस्तफा नेपाली क्रिकेटमा परिचित नाम हो । उनले यसअघि पनि इपिएल, डिपिएल र पीपीएल खेलिसकेका छन । एउटा चतुर कप्तानका साथै अब्बल ब्याट्सम्यान र बलर उनको उपस्थितीले काठमाडौका कप्तान सोमपाल कामीलाई झन हौसला मिलेको हुन्छ । त्यो हामीले पीपीएलमा पनि देखेका थियौ । पीपीएलमा पनि रोहन सोमपालकै टिमबाट खेलेका थिए । उनले कुल २६ ओडीआइमा ६४१ रन बनाएका छन भने २८ विकेट लिएका छ । यस्तै टी–२० मा २४ खेलमा ४११ रन र १९ विकेट लिएका छन । सन् २०१४ मा स्कटल्याण्ड विरुद्ध एकदिवसिय डेब्यु गरेका उनले यसै बर्ष अष्ट्रेलिया विरुद्ध टी–२० खेलेका थिए ।
टेष्ट मान्यता देश आयरल्याण्डका अनुभवी खेलाडी केभिनसँग इंग्ल्याण्डमा काउन्टी खेलेको निकै अनुभव रहेको छ । उनले समरसेट, लेइनस्टेर लाइटनिङ, सुर्रे र लेस्टरसायरबाट खेलेका छन । जसमा समरसेट, सुर्रे र नर्दन डिस्र्टिकबाट टी–२० मात्र खेलेका छन । पहिलो टेष्टमा नै सतक प्रहार गरेका उनले एक सय २८ एकदिवसिय खेलमा ३१७२ रन तथा ११२ विकेट लिएका छन । यस्तै अलराउण्डर केभिनले टेष्ट, ओडीआइ, फस्र्ट क्लास र लिष्ट ए सबैमा सतक बनाएका खेलाडी हुन । नेपालमा पहिलो पटक खेल्न आएको केभिनको अनुभव काठमाडौंका लागि बलियो पक्ष हुनेछ ।
कसरी राम्रा विदेशी खेलाडी ल्याउन सकिन्छ भनेर ध्यानमा लागेका इपीएलमा सहभागि टिमहरुमा चितवन टाइगर्सले आयरल्याण्ड र इंग्ल्याण्डबाट खेलाडी झिकाएको छ । त्यसमा विस्फोटक ब्याट्सम्यान पउल स्ट्रलिङको नाम पहिले आउछ । अहिलेपनि युएइमा जारी टी–१० क्रिकेट खेलिरहेका पउल टी–२०मा बलरलाई दुःख दिने खेलाडीमा पर्छन ।
अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटको राम्रो अनुभव बोकेका पउलले १०० ओडीआइ खेलेका छन । उसमा उनको उच्च स्कोर १७७ रन रहेको छ । उनले १६ अर्धसतक र ७ सतक बनाएका छन । यसका साथै उनले यसै सिजन अफगानिस्तान प्रिमियर लिग पनि खेल्नेछन ।
इंग्ल्याण्डको मिडिलसेक्सबाट क्रिकेट खेल्ने खेलाडी हुन जोन सिम्सोन । विकेटकिपर ब्याट्सम्यान जोनले इंग्ल्याण्डको अन्डर नाइन्टिन टिमबाट खेलिसकेका छन । यसका साथै उनले २०१७ को सजनमा डाका प्रिमियर डिभिजन लिग खेलेका थिए । ९४ टी–२० खेल खेलका उनले १५५७ रन बनाएका छन । जसमा उनको उच्च स्कोर ८४ रन रहेको छ । नेपाली भुमिमा पहिलो पटक खेल्न लागेको उनको प्रदर्शनपनि हेर्न लायक हुनेछ ।
हङकङका बाबर हायात, नेदरल्याण्डसका पल भान मिकीरन, रोयलोफ भान देर मार्वी र भारतका समित पटेललाई ल्याएको छ । यस्तै प्रशिक्षकमा पनि उमेश पटवाललाई राखेको छ ।
गत सिजनमा पनि विराटनगरबाट नै खेलेका बाबर एक आक्रमक खेलाडीका रुपमा चिनिन्छन । यस्तै नेदरल्याण्डसका पलले उमेर समुहको राष्ट्रिय टिमबाट खेलेका छन । अलराउण्डर पलले टी–२० मा ३८ खेल खेलेका छन भने जसमा बलिङमा २५ विकेट लिएका छन । यस्तै नेदरल्याण्डस्कै अनुभवी खेलाडी मार्वीले एक सय ८९ टी–२० खेलमा दुई हजार एक सय ९ रन तथा एक सय ७४ विकेट लिएका छन । अर्का खेलाडी भारतको गुजरातबाट अनुबन्ध गरेको छ ।
यता ललितपुरले तीनै खेलाडी भारतबाट ल्याएको छ । जसमा जयकिशन कोल्सावाला, सन्नी पटेल र गौरव टमोर रहेका छन । तीन खेलाडीले यसअघि पनि नेपाली क्रिकेटमा आफ्नो क्षमता देखाइसकेका छन ।
जसमा सन्नी पटेलले हालैसम्पन्न पीपीएलमा उत्कृष्ट खेलाडी बनेका थिए । यस्तै गौरव टमोर सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी बनेका थिए । यी ती खेलाडी प्रोफाइलका हिसावले कम देखिएपनि मैदानमा उनीहरुले विपक्षीलाई आच्छु आच्छु पार्ने गरेका छन ।